वर्षाको ढाँट्ने बानीले निर्माता-निर्देशक हैरान ! – Bihani Khabar
Home / Entertainment / वर्षाको ढाँट्ने बानीले निर्माता-निर्देशक हैरान !
वर्षाको ढाँट्ने बानीले निर्माता-निर्देशक हैरान !
‘बरु वर्षाको भर गर्नु तर वर्षा सिवाकोटीको भर नगर्नु,’ वर्षा सिवाकोटीको व्यवहार देख्नेहरूले आजभोलि यसै भन्न थालेका छन् । फिल्ममा खेल्छु भन्नमा र छाड्नमा कुनै पनि व्यावसायिक मर्यादा पालना नगरेको देखेर नै मान्छेले वर्षालाई वर्षा यामसँग तुलना गरेका हुन् । उनले ‘ब्ल्याक’, ‘मेरो पैसा खोइ’ आदि फिल्म साइनिङ अमाउन्ट लिएर पनि फिर्ता गरिदिएकी थिइन् ।
भर्खरै मात्र पनि उनले अन्नपूर्ण होटलमा टन्न खर्च गरेर घोषणा भएको फिल्म ‘रानीमहल’ छाडिदिइन् । ‘रानीमहल’ छाड्नमा उनले डेटको समस्या देखाएकी थिइन् ।
भिसा लागेको ६ महिनाभित्रमा अमेरिकामा गइसक्नु पर्ने तर ‘रानीमहल’को सुटिङ सर्दा आफू र फिल्म दुवैलाई असर गर्ने भन्दै फिल्म छाडेकी थिइन् तर अमेरिका जानु कता होे कता दुई दिनअघि मात्र ‘जय शम्भु’ शीर्षकको फिल्मको घोषणामा पोज हानी–हानी फोटो खिचिरहेकी थिइन् ।
‘रानीमहल’मा वर्षाअघि प्रशान्त ताम्रकारले पनि डेटकै समस्या देखाउँदै छाडेका थिए । पछि वर्षाले पनि उही समस्या देखाएर छाडिन् । अनि ‘जय शम्भु’मा प्रशान्त र वर्षा दुवैले अभिनय गर्दैछन् । दुवैका बीचमा केही न केही त खिचडी पाकिरहेको हो कि ?
Previous आनाको १० लाख भनेको जग्गा ७ दिन मात्र भयो ६ लाख आनामा लिनुभन्दा पनि मान्छेले लिन छोडिसके
Next कृष्ण महराको परिवारले यसरि छोडेका थिए रोल्पाको पुर्ख्यौली त्यो घर
ज्योती मगर माथी आँखा लगाउने यि प्रहरी को हुन् ?
कालिकोटमा प्रहरीसँगको झडपमा म्यादी प्रहरीको मृत्यु
‘गुरुङको विषयमा लिम्बुले बनाएको फिल्म काम लाग्दैन’